The United Nations Country Team expresses profound concern on use of lethal force by security forces | United Nations in Myanmar
(Yangon) The United Nations Country Team in Myanmar expresses profound concern over the events yesterday (20 February 2021) at the Yadanarbon Shipyard in Mandalay in which security forces used lethal force against demonstrators, reportedly killing two and leaving dozens wounded, some of whom remain in serious condition. The United Nations Country Team in Myanmar extends its thoughts and condolences to the families of the victims and to those injured.
​​မ​နေ့က (ဖေဖော်၀ါရီလ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၂၁) မန္တလေးမြို့ရှိ ရတနာပုံသ​​​​င်္ဘောကျင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့​သော လုံခြုံ​ရေးတပ်ဖွဲ့များမှ ဆန္ဒပြသူများအပေါ် လူကို​သေ​စေသည်အထိ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းသည့်ဖြစ်စဉ်များမှလူနှစ်​​ယောက်​သေဆုံးခဲ့ပြီး လူပေါင်းဒါဇင်နှင့်ချီ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ကာ အချို့မှာ ​စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအ​ခြေအ​နေတွင်ရှိ​နေကြောင်း ကြားသိရသည့်အတွက် များစွာ စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိ​ကြောင်း ​မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများက ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ​​သေဆုံးသွားသူများနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများ၏ မိသားစုများနှင့်ထပ်တူ လွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသည်။